दिउँसो सुत्ने बानी स्वास्थको लागि राम्रो की नराम्रो? यस्तो सम्म हुन्छ जन्नुहोस! | सुदुरपश्चिम खबर
को’रोना भ’य र लकाउनको कारण अधिकांश घरभित्रै खुम्चिए । घरभित्र बस्दा के गर्ने ? कामधन्दाको मेलोमेसो नपाएकाहरुलाई समय कटाउन गाह्रो भयो । भान्साको काम गर्ने कि ? बगैंचामा रमाउने ? बालबच्चासँग खेल्ने ? विकल्प अनेक हुनसक्थ्यो । तर, सधैभरी मुड हुँदैन । यस्तो अवस्थामा समय कटाउने बाहाना बन्छ, बेपर्वाह सुत्ने ।
यस्तो बानी भएका मानिसहरुलाई दिँउसो थ’कान महसुस हुन्छ र निन्द्रा लाग्न थाल्छ । दिउँसो सुत्ने मानिसहरुलाई धेरैले अल्छीको संज्ञा दिन्छन् ।त्यस्तै दिँउसो सुत्ने बानीलाई लिएर हरेकको मनमा दिँउसोको निन्द्रा राम्रो हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ, दिँउसो सुत्नु उचित होइन । एक त यो हाम्रो शरीरको जैविक घडी विपरित काम भयो, अर्को चाहिँ आफ्नो कामधन्दामा असर गर्ने भयो । किनभने दिँउसोको समयमा नै हामी अधिकांशले आफ्नो काम व्यवहार पुरा गर्छौं । त्यसैले दिँउसो सुत्ने बानीले गर्दा आफ्नो नियमित काममा अ’वरोध पुग्छ । कतिपय महत्वपूर्ण कामहरुमा पनि यसले असर गर्न सक्छ ।
खासगरी कामको थकान मेट्न यसरी सुत्नु राम्रो मानिन्छ । सुतेको बखत शरीरलाई राम्रो विश्राम पाउने भएकाले तनाव र थकान कम हुन्छ । मन शान्त हुन्छ र शरीरले आनन्दित महसुष गर्छ । त्यसैले निश्चित समयका लागि दिउँसो सुत्नुलाई हा’निकारक मानिदैन ।
जो मानिस दिउँसोको समयमा १५–३० मिनेट निदाउँछन् उनीहरुको अल्छीपना टाढा हुन्छ । त्यस्तै त’नाव वा मा’नसिक थ’कानलाई टाढा गर्न चाहनुहुन्छ भने दिउँसो ९० मिनेट निदाउनु राम्रो हुन्छ ।
मानिसलाई दिनमा कति निन्द्रा आवश्यक छःआम रुपमा हरेक मानिसलाई एक दिनमा ७–८ घन्टाको निन्द्राको आवश्यकता हुन्छ भन्ने गरिन्छ । तर, यसको लागि कुनै सामान्य नियम हुँदैन ।
यसैगरि १४ देखि १९ वर्षका किशोरहरुलाई ८ देखि १० घन्टा निदाउन राम्रो हुने चिकित्सकहरु
बताउँछन् । वयष्क मानिसहरुको लागि ६ देखि ८ घन्टा सुत्नु राम्रो हुन्छ । ६ घन्टाभन्दा कम सुत्नाले भने स्वास्थ्यलाई असर गर्छ ।
त्यस्तै ६० वर्ष भन्दा धेरै उमेरका मानिसहरुको लािग सामान्य भन्दा धेरै घन्टा सुत्न आवश्यक हुन्छ । यो उमेरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कैयौं किसिमका समस्याहरु आउँछन् । थकान वा मानसिक तना’वलाई टाढा गर्नको लागि १० देखि १२ घन्टा वा अझै यस भन्दा धेरै निदाउन सकिन्छ । gnewsnepal